ब्लग पोष्ट नम्बर १००० - टेकपोइन्टबाट प्रत्यक्ष! | Martech Zone
यो नै हो! ब्लग पोष्ट नम्बर १००० - बाट प्रत्यक्ष १० औं वार्षिक टेक्वाइंट समिट इन्डियानापोलिस, IN मा। इन्डियानामा टेक्नोलोजी शिखर? विडम्बनाको कुरा, म बहु-च्यानल मार्केटिंग सत्रमा छु आवाजमा बोल्दै, इमेल मार्केटिङ, र कर्पोरेट ब्लगि मार्केटिंगका साथै साथ कानूनीता प्रत्येक संग सम्बन्धित।
विराटनगर, गभर्नर मिच डेनियल यसका बारे मजाक पनि आज बिहान, डेभिड बेकर, सीईओ द्वारा एक महान परिचय पछि पहिलो इन्टर्नेट बैंक, र रोन ब्रुम्बरगर, का सीईओ Bit बुद्धिमान समाधानहरू.
सरकार डानिएल्सले प्रदान गरेको चौंकाउने तथ्यांक मध्ये एक हो कि इन्डियानाको व्यवसाय सुरुआतमा जीवनको लागत, कर प्रोत्साहनहरू र देशको सबैभन्दा कम कामदारहरूको क्षतिपूर्ति लागतको लागि धन्यवाद स्टार्टअप लागतमा २०% औसत कटौती छ।
टेक्नोलोजीमा आधारित कम्पनीहरूका लागि टेकपोइन्ट र राज्य सरकारले पनि निर्माण गर्न काम गरेका छन् २१ औं शताब्दी कोष साथै नयाँ प्याटेन्ट-उत्पादित बिक्री, अनुसन्धान र विकास लगानी, र रोजगार अनुदानमा कर प्रोत्साहनहरूको एक विशाल मात्रा।
इन्डियानाको बारेमा राम्रो कुरा के हो कि बाँच्नको लागत कम छ र इन्डियानापोलिस मध्य-मध्यमा केन्द्रित छ। यदि तपाइँ एक टेक्नोलोजी व्यवसाय सुरू गर्न लाग्नु भएको थियो भने, २०% को औसत बचतले तपाइँको कम्पनीको अस्तित्वको अवसर र अन्तरिक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको बीचमा भिन्नता ल्याउन सक्छ।
खुलासा: म प्रायः रोनको कम्पनीमा उसको ग्राहकहरुलाई सामाजिक मिडिया रणनीतिहरुमा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्दछु। रोनले आजको घटनामा मेरो बाटो भुक्तान गर्यो (धन्यवाद!) साथै, मैले पूर्ण-समयको लागि काम गर्ने कम्पनी डेभिडको लगानीकर्ताको रूपमा भाग्यशाली छ! र पक्कै पनि, मेरो मालिकलाई धन्यवाद दिन मलाई दिनको लागि!
केवल नोट: १,००० पोष्टको उत्सवमा $ १,००० सस्ताको लागि हेर्नुहोस्, १,००० अनौंठो आगन्तुकहरू एक दिन, र १,००० फिड ग्राहकहरू ... वाह! हामीले यो बनायौं!
टैग: 10001000 पोस्टindianaइंडियानापोलिसटेकपोइन्ट
तपाईंलाई बधाई दिन मलाई पहिलो (अनलाइन) बन्न दिनुहोस्! सबै १ र ० को विचार गर्नुहोस्!
म तपाईंलाई डग सुन्दछु। हालसालै मैले धेरै गलत ईमेलहरू प्राप्त गर्दै छु मेरो इनबक्समा। यो चाखलाग्दो छ कि तपाईंले प्रमुख प्रदायकहरूमा मुद्दा हाल्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो मात्र एक दिन हुन सक्छ।